Mandosira ny tsy fitoviana-Arovy ny onjanao ratsy
Famakafakana Data Excel: Famakafakana angona amin'ny '...
Posted by Tranquillus | Jan 6, 2018 | Personal Development
Afaho ny terakagativité
Te-hamarana ny disadisa izay manenina anao ianao ary tsy fantatrao ny fomba hanaovana izany?
Ny fihetseham-po ratsy dia misy fiantraikany eo amin'ny tenantsika sy ireo manodidina antsika.
Ny Negativity dia afaka mamadika andro iray tsotra ao anaty nofy ratsy ary mety ho tsindry, fanahiana na ratsy kokoa.
Rehefa mamela ny tenanao ho tototry ny fihetseham-po ianao dia mamela fahatezerana mitarika anao ary mampitony ny fahafahana ho sambatra amin'ny fiainanao, samy matihanina sy manokana.
Na dia noho ny toetran'ny olona tsara toetra aza, dia tsy misy olona tsy atahorana ho voasariky ny herin'aratra ratsy.
Fikirana amin'ny mpitsabo nify? Tafatafa tamin'ny asam-baovaon'ity takariva ity? Fanadinana iray? Ny eritreritsika dia maminavina ny ratsy indrindra ary mety hiteraka fanahiana haingana be ireo toe-javatra ireo.
Ny fahafahana mandositra ny disadisa dia loharanom-pitaovana lehibe mba hampivelarana ny fahaiza-manaony sy ny fitiavan-tena.
Ny vahaolana dia tsy hilatsaka avy any an-danitra na avy any ivelany, fa ao aminao izany.
Aza miandry intsony, jereo ao amin'ity lahatsary misy ny 4 min, vahaolana sy toro-hevitra izay hametra ny fiantraikan'ny disadisa eo amin'ny fiainanao andavanandro ..., ary amin'ny rehetra, amin'ny 5 fotsiny dia manondro:
1) fankasitrahana : loharano tena ilaina ho an'ny talenta manokana sy matihanina!
2) Onja ratsy : mamantatra sy miaro ny tenanao amin'ny onja ratsy!
3) Ny toetrany : Ny eritreritra ratsy dia manintona ny tsy fitoviana, maneho hevitra.
4) Fitrandrahana : fantatry ny besinimaro, ny mamboraka amin'ny teny am-bava fa amin'ny alàlan'ny fanoratana dia ahafahana mandroso sy mamadika ilay pejy. Eritrereto ny hamoahana ireo hery ratsy rehetra manjò anao.
HAMAKY Fantaro ny fomba hanaovana ny fanapahan-kevitra tsara
5) Visualization : Alao sary an-tsaina ny toe-javatra tsara. Toerana iray, toerana iray, toe-javatra iray ... mandao ny tenanao amin'ny eritreritrao ary ataovy tsara.
Ny fahasambaranao dia laharam-pahamehana ary loharano lehibe iray mba hampivelarana ny fifandraisanao sy ny fiheveranao.
Mandosira ny tsy fitoviana-Arovy ny onjanao ratsy May 11th, 2020Tranquillus
Teo alohaToro-hevitra voalohan'ny ampaham-potoana
manarakaTuto.com: Courses amin'ny fianarana ara-tsosialy mba hampiofanana ny sehatry ny harona.
Fanalahidy 5 izay afaka manampy amin'ny fitantanana tsaratsara kokoa / misoroka ny adin-tsaina
Miferinaina, milazà dingana iray ary maneho ny fihetseham-ponao amin'ny fomba mandamina.
Ahoana no hahalavorary amin'ny toe-javatra rehetra?
Ataovy haingana ny fahombiazanao mba hahatratrarana ny tanjonao.
fifandraisana an-tsoratra sy am-bava - fiofanana maimaimpoana (14) marina (161) Fiofanana maimaimpoana ho an'ny fampandrosoana manokana sy matihanina (49) Fiofanana maimaimpoana momba ny fandraharahana (81) Fiofanana maimaimpoana Excel (33) Fiofanana matihanina (104) fiofanana maimaim-poana amin'ny fitantanana tetikasa (15) fiofanana maimaim-poana amin'ny fiteny vahiny (9) Fomba sy torohevitra amin'ny fiteny vahiny (22) Fiofanana maimaim-poana amin'ny lozisialy sy ny fampiharana (20) Modely taratasy (19) mooc (171) fiofanana maimaimpoana amin'ny fitaovana google (14) Fiofanana maimaim-poana PowerPoint (13) Fiofanana momba ny mari-barotra amin'ny Internet maimaimpoana (72) Fiofanana tsy misy teny (13)